Izay Hihaona any an-Toerana ny Ankizivavy — Dubai Sehatra fiadian-kevitra
Izaho dia handeha ho any Dubai matetika ary te hahafantatra izay ny eo an-toerana ny tovovavy mifanerasera. Ny hany toerana mangatsiatsiaka nahita aho dia ny Vatolampy Ambany, fa izany dia ny ankamaroany, mpizaha tany. Izaho dia handeha ho any Dubai matetika ary te hahafantatra izay ny eo an-toerana ny tovovavy mifanerasera. Ny hany toerana mangatsiatsiaka nahita aho dia ny Vatolampy Ambany, fa izany dia ny ankamaroany, mpizaha tany. Fotsiny, satria izy ireo no tsy mitafy ny abaya intsony dia tsy midika hoe tsy ao ny club. Izy io dia tsy fahita firy izany, saingy efa nisy dia nisy avy amin’ny maro teo aloha. Niezaka hiresaka ny iray, fa izy dia tena saro-kenatra.
Nahamarika aho fa ny ankamaroan ny fotoana, izany ry zalahy, izay ampiasaina mba hijery ahy Andriamanitra mamonjy ny vadin’ny mpanjaka, dia ny teny arabo ny ankizivavy no tena mahafatifaty. Izy ireo dia manana mihoatra manintona noho ny fotsy zanany nametraka mitanjaka amin’ny tora-pasika hiezaka misy ny trano fandraisam-bahiny trano fisotroana tao Deira na ny Bur Dubai sy ianao dia hahita ny maro ny ‘mahafinaritra’ ankizivavy izay azo amin’ny maha ao an-toerana vonona handoa izany. miezaka misy ny trano fandraisam-bahiny trano fisotroana tao Deira na ny Bur Dubai sy ianao dia hahita ny maro ny ‘mahafinaritra’ ankizivavy izay azo amin’ny maha ao an-toerana vonona handoa izany.
Halako ny fandoavana
Isika dia tokony handany ny hery sy ny vola. kaloria dia tena lafo ary ny andro. Ny ankizivavy dia tsy misy ho very. Ny tiako holazaina dia ho tonga vaovao indray rehefa afaka minitra vitsivitsy. Fa rehefa hanky punky, ny atidoha sela ny lehilahy handeha hatory. Izany no mahatonga antsika foana ny sarany te hatory taorian’ny s.e.x.DK, ianao no mahalala izay aho miresaka momba ny. Amin’ny alalan’ny famangiana sy ny famakiana ny toerana manaiky fa ny lahatsoratra rehetra natao ireo sehatra fiadian-kevitra maneho ny fomba fijeriny sy ny hevitry ny mpanoratra ary tsy ny mpitantana, moderators na webmaster (afa-tsy ho an’ny lahatsoratra ireo olona) ary noho izany dia tsy azo natao mendrika
← Ahoana no bi sekoly ambony lehilahy tokony hihaona mitovy olona ivelan'ny sekoly. pelaka, sady lahy no vavy fahazavana Mangataka Metafile
Chat arabo maimaim-poana - ny Fivoriana sy ny namana adihevitra tsy misy fisoratana anarana →